लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? यी प्रश्न एकपटक अाफैलाई सोध्नुस् « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? यी प्रश्न एकपटक अाफैलाई सोध्नुस्
२० असार २०७४, मंगलवार ०७:०७
हामी सबै राम्रो पैसा कमाउछाै बचाउछाै तर सहि जानकारीको अभावमा कहा त्यो रकम लगानी गर्ने भन्ने बारेमा अलमल नै हुन्छम । तर हामी बिना याेजना गलत हिसाबले लगानी गरिरहेका हुन्छाै । त्यस कारण लगानीकाे लागि सुझबुज तरिका अप्नाउन जरुरी छ ।
कति लगानी गर्ने ?
सबै भन्दा पहिले तपाई खर्चको लागि पैसाको राख्नुस र त्यस पछि अापतकालिन अवस्थाका लागि केही राख्नुस । सबै भन्दा जरुरी भनेको तपाईको नियमित अाम्दानी हो । तपाई त्यो अाम्दानीलाई ३ भागमा बाढ्नुस, क्यास इन्कम र ग्रोथ । तपाईको पैसा बैंक अकाउन्टमा छ भने त्यसलाई अलि बढाउन सक्नु हुन्छ ।
लगानी गरेको पैसा नै जरुरी भए के गर्ने ?
तपाइ अाफ्नो जरुरी कामको लागी छुट्टै पैसा निकाल्नुस् । बीमा यो मामलामा लगानीको लागि सबै भन्दा राम्रो तरिका हुन्छ । बीमाबाट कभर नहुने महत्वपुर्ण कार्यको लागि तपाई पैसा इयरमार्क गर्न सक्नु हुन्छ । धेरै प्रीमियम भएको बीमाबाट भने तपाई जोगिनु नै पर्छ ।
तपाईले सुरक्षित उत्पादन भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु उचित हुन्छ । तर तपाई त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी नगर्नुस् की त्यसको रिटर्नको कुनै टुंगो नै छैन । तपाईले लगानी धेरै ठाउमा थोरै थोरै गर्नु भएको छ भने त्यो सबै भन्दा महत्वपर्ण बन्न जान्छ । घर जग्गा र सुन अादीमा लगानी निकै खतरा हुन्छ ।
के पैसाको मुल्य लगानी भन्दा कम हुन्छ ?
पैसाले अाफ्नो मुल्य त्यो बेला हराउछ जुन बेला लगानी हुदैन । महंगी बढ्दा हाम्रो खर्च बढ्छ तर लगानी पनि केही मात्रामा बढाउदै लगे त्यसले महंगी बिरुद्ध लड्न मदत गर्छ ।
कसरी मान्ने कि पैसा सुरक्षित रहन्छ ?
तपाईले लगानी कहा लगाउनु भएको छ त्यसमा यो कुराको निर्भर रहन्छ । तपाईले लगानी भनेको विश्वासनी नाम भएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुस ताकी तपाइले त्यसका पुराना गतिविधीलाई समेत नियाल्न सक्नुहोस । कसैले यो मान्छन कि रिटर्न नै पैसा सुरक्षित रहनु हो । यो जान्न जरुरी छ कि तपाईको रकम लगानी त भएको छ तर कुन क्षेत्रमा भएको छ ।
के मार्केट क्रयास भए पैसा डुब्छ ?
तपाई नियमित जागिर खानु हुन्छ भने तपाई रिक्समा हुनुहुन्न । तपाई लगानी गरिरहनु भएको छभने अाफ्नै अतिरिक्त रुपैयाँ लगानीमा लाउनु भएको छ । बजार उतार चढाव अाइनै रहेको हुन्छ । लामो समय सम्म हेर्ने हो भने तपाई अाैसत फाइदा कमाउनु हुन्छ ।
प्रकाशित : २० असार २०७४, मंगलवार ०७:०७